Anthropology (မနုဿဗေဒ) ဆိုတာဘာလဲ – Live the Dream
Anthropology (မနုဿဗေဒ) ဆိုတာဘာလဲ
“လူတွေဟာ မျောက်ကနေ ဆင်းသက်လာသတဲ့” နေရာဒေသအလိုက် လူတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို အမျိုးမျိုးတော့ ဖွင့်ဆိုနေကြတာပဲ၊ ယုံတမ်းပုံပြင်တွေ ပြောနေကြဆဲပဲ… ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ စတင်ဖြစ်တည်ရာ အရင်းအမြစ်ဟာ ဘာပါလဲ…? ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေမှာ ကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်စီ ရှိနေကြရတာလဲ…? ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုယ်ဟာ အတွေးသမားလေး တစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်က အဖြေတစ်ခု ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်က ဘာလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
မနုဿဗေဒဘာသာရပ်ဟာဆိုရင် လူ့ဇီဝနှင့် ဇီဝကမ္မဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များ၊ လူသားတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများနှင့် ရှင်သန်နေထိုင်ပုံများကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာရတဲ့ လူသားဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်မှာတော့ အခြေခံအားဖြင့် လူမှုယဉ်ကျေးမှု၊ ဇီဝဗေဒနဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဆိုပြီး အပိုင်းသုံးပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ လူမှုယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍမှာ ဆိုရင်တော့ လူမှုရေး အသွင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ လူသားဂေဟဗေဒအကြောင်းတွေ၊ လူမျိုး အဆင့်အတန်း ကျားမ မညီမျှမှုတွေ၊ ခုခံလှုပ်ရှားမှု ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဇီဝဗေဒ ကဏ္ဍမှာဆိုရင် လူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဇီဝဗေဒ၊ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လေ့လာမှုများ၊ လူသားတွေရဲ့ ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ပရိုင်းမိတ် (အဆင့်အမြင့်ဆုံး နို့တိုက်သတ္တဝါ) တွေကို လေ့လာပြီး လူသားတို့ရဲ့ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသန ကဏ္ဍမှာတော့ လက်ရှိနှင့် အတိတ်ကာလ ယဉ်ကျေးမှုစနစ်များကို လေ့လာပြီး ထိုစနစ်များ၏ နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နောက်ကွယ်မှ ယဉ်ကျေးမှု ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များကို ရှာဖွေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ မနုဿဗေဒ အခြေခံ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာသမိုင်းကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း လိုအပ်ချက်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အယူအဆများ၊ ဘာသာရေး ကိုးကွယ်ယုံကြည်ချက်များ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ၏ ပထဝီဝင်၊ မြန်မာ့ပထဝီဝင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေး မနုဿဗေဒ၊ စီးပွားရေး မနုဿဗေဒ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒ၊ ပရိုင်းမိတ်နှင့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်နှင့် လူမျိုးစုအကြောင်း စတဲ့ ဘာသာရပ်အခွဲတွေကို သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မနုဿဗေဒ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ
မနုဿဗေဒဘာသာရပ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် သေချာမသိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒါဟာ သိပ်ပြီး အထင်ကြီးစရာ မကောင်းတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်သလို လူသားတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ဆိုသော အရာကိုလည်း ဒီမနုဿဗေဒ ပညာရပ်ကနေတစ်ဆင့်ပဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်မှာ လူမှုဗေဒ၊ စိတ်ပညာ၊ နိုင်ငံရေး၊ သိပ္ပံပညာ၊ စီးပွားရေး၊ သမိုင်းကြောင်း၊ စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ အလျောက် မနုဿဗေဒ ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ လူသားတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်၊ ရှေးနှစ်ပေါင်း ရာချီ ထောင်ချီတုန်းက လူသားတွေ ဘယ်လို ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြသလဲ၊ လူသားတွေရဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေကို အဓိက လေ့လာကြရပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ ဇီဝရုပ်နဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်း၊ လူသားတွေ အပေါ် လူမှုဆက်ဆံရေး သဘောတရား သက်ရောက်ပုံ၊ မတူကွဲပြားကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်းတွေအပြင် လူသားတွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လူဦးရေတိုးပွားလာမှု ပြဿနာတွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ မညီမျှမှုတွေ၊ ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြစ်စဉ်တွေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ စစ်ပွဲ အကြောင်းတွေကိုပါ ဆန်းစစ်ကြရပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေ ပါဝင်နေပြီး ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအတွက် အရေးကြီးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မနုဿဗေဒ နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
မနုဿဗေဒ ဘာသာရပ်လေ့လာခြင်းက လူမျိုးစုအသီးသီးရဲ့ ဇီဝရုပ်ပိုင်းရာ၊ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုများ၊ တိုးတက်မှုများအပြင် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုကို သိပ္ပံနည်းကျကျလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိအနေနဲ့ မိမိရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဖြစ်တည်တွေက ဘယ်ကဖြစ်လာတယ်၊ ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်၊ ဘာကြောင့် တစ်ခြားသူများနဲ့ တစ်ခြားလူမျိုးများနဲ့ကွဲပြားရလဲဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်ရဲ့အရေးပါပုံက တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအပေါ်သာမက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ လူမျိုးတစ်မျိုး အပြင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လူမျိုး၊ ဘာသာ အသီးသီးရဲ့ တူညီမှုတွေနဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို နားလည်သိမြင်မှ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာ‌ရေး ပြဿနာမဖြစ်စေဖို့၊ လူသားအချင်းချင်း နားလည်လက်ခံနိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရှေးခေတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ပုံစံများကို လေ့လာရတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို သမိုင်းကြောင်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ပျက်စီးနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြောင်းရင်းများကို သိရှိပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒါ့အပြင် မနုဿဗေဘာသာရပ်က ဇီဝဗေဒ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန၊ ဘာသာစကားဗေဒ၊ လူမှုယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုဝန်းကျင်အတွက်တော့အကျိုးရှိလှတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်ရဲ့ နည်းပညာများ၊ စီးပွားရေးများတိုးတက်မြင့်မားလာတာနဲ့အတူ လူနေမှုစနစ်များလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲခြင်းများစွာထဲမှာမှ တိုးတက်မှုရှိလာနိုင်သလို ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုတွေကိုလည်း ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ကောင်းမွန်ငြိမ်းချမ်းစွာလည်ပတ်နိုင်ဖို့က စီးပွားရေးနဲ့နည်းပညာများအပြင် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ပိုင်းမှာလည်း အားနည်းနေလို့မရပါဘူး။ ထို့အတွက်ကြောင့် မနုဿဗေဒလို လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေက လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဆက်လက်လေ့လာဖို့ရှင်သန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်း ဖြေရှင်းမရတဲ့နားမလည်နိုင်သေးတဲ့အရာများလည်းရှိနေသေးတဲ့အတွက် ထူးချွန်တဲ့ မနုဿဗေဒပညာရှင်များပေါ်ထွက်ဖို့လိုအပ်သလို လူတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုအရှုပ်အထွေးတွေကို ပိုမိုနားလည်ဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော့ လူသားအချင်းချင်းနားလည်မှုတွေပိုမိုတိုးပွားလာပြီး အနာဂတ်မှာ ပိုမိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။